‘गोकुल बास्कोटालाई अपराधीजस्तो नगरौं भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ’ - दर्पण संसार
‘गोकुल बास्कोटालाई अपराधीजस्तो नगरौं भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ’
२०७६ फाल्गुन १६, शुक्रबार १०:३५ बजे
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले राष्ट्रियसभामा एक जनाको नाम मनोनयनको विषय पार्टी आफैंले निर्णय गर्ने विषय नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘अहिले राष्ट्रियसभा सदस्यको लागि वामदेव कमरेडको नामको प्रस्ताव आयो । यो विषय पार्टी आफैंले निर्णय गर्ने विषय होइन ।’
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै भट्टराईले राष्ट्रियसभा सदस्यको लागि मनोनयनको विषय संविधानले गरेको व्याख्यानुसार पनि सरकार र राष्ट्रपतिबीचको विषय भएको सुनाए ।
उनले भने,‘सरकार र राष्ट्रपतिको विषय भएपनि पार्टीको सरकार भएको हुनाले पार्टीकै सुझाव दिने तहमा जुन प्रस्ताव गरेको छ, त्यो प्रस्ताव र अब अर्थमन्त्रीज्यू के हुनुहुन्छ ? अर्थमन्त्रीको पनि कार्यकाल २० गते नै सकिँदैछ । अब यी दुई जनाको नाममा नै लडाई हुन्छ कि भनेर सारा मान्छेलाई लागेको छ । यो व्यवस्थापन गर्न नसकिने विषय नै छैन् । यसको एकदमै उपयुक्त हिसाबले व्यवस्थापन हुन्छ । त्यसको रिजल्ट के हुन्छ ? मैले अहिले बोल्न हतारो हुन्छ । एक/दुई दिन कुर्न म साथीहरुलाई अनुरोध गर्छु । त्यसपछि तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ ।’
उनले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि संविधान संशोधन गर्ने विषय फिर्ता भएकोले अब यसबारेमा चर्चा गर्न जरुरी नभएको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘जसले यो विषयको सुरुवात गर्यो सचिवालयले फिर्ता गरिसक्यो ।’
उनले जनताले जुन किसिमको विश्वास नेकपालाई दिएका छन् र सरकार चलाउने जुन पाँच वर्षको म्याण्डेट दिएका छ्न् त्यसबाट नेतृत्व दायाँबायाँ नहुने विश्वास दिलाए । उनले कोही कसैलाई लागेर ‘यसमा विचलित गराइहालौं अथवा म हुँ’ भन्ने लागेको छ भनेपनि त्यो आफ्नो विचारमा असफल हुने ठोकुवा गरे । उनले भने,‘त्यस्तो असफलताको बाटोमा कोही पनि नलाग्नु नै श्रेयकर हुन्छ ।’ फरक प्रसँगमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अहिले नेपालको अत्यन्तै अनुकुलतामा गैरहेको विश्वास दिलाए । उनले अमेरिकी सहयोग एमसीसीको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै संसदको रोस्ट्रममा उभिएर बोलिसकेको स्मरण गराए ।
उनले एमसीसी पारित गरेर जानुपर्ने धारणा राखे । उनले भने,‘एउटा सरकारले निर्णय गेकोको छ । अर्को सरकारले गर्दिन भन्नुहुँदैन । यसले अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असर पर्छ । तर, राष्ट्रिय अहितमा छ भने उनीहरुसँग शीर ठाडो पारेर कुरा राख्ने ठाउँमा हामी छौं । सम्झौतामा यो यो विषय अहितका विषय छन् भनेर हामीले भन्नुपर्छ । तर, हामी लतारिएर जाँदैनौं । यो २००७ साल वा २०३० सालको जस्तो सरकार होईन् । दायाँबायाँ चल्न के जरुरी छ ? आज जसले गलत गर्छ, भोलि त्यो जनताको कठघरामा उभिनुपर्छ ।’
गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाको प्रकरणमा सत्य–तथ्य के हो ? भन्ने कुरा छानबिन गर्न दिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने,‘यो प्रकरणमा छानबिन हुँदैछ । छानबिनमा जे आउँछ, त्यसलाई सबैले मान्नुपर्छ । यो प्रकरणमा सरकार कहीपनि चुकेको छैन् ।’ उनले गल्ती गर्नेहरु सजाय भोग्न तयार हुनुपर्ने जिकिर गरे ।
उनले भने,‘उहाँमाथि आरोप लागेपछि उहाँले राजीनामा दिएर छानबिनको लागि बाटो खोलिदिनुभएको छ । तर, अहिले नै उहाँलाई अपराधीजस्तो नगरौं भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको हो ।’ उनले मुलुकमा पछिल्लो २०/२५ वर्षमा के कति घटना भए ? र कसरी लुकाइयो ? भन्ने कुरा पनि पछिल्लो ललिता निवास प्रकरणको कुरा बाहिर आएपछि झन प्रष्ट भएको संकेत गरे ।
उनले भने,‘मुलुक कानूनी शासनअनुसार चल्छ । विधिको शासनले चल्छ । जो सुकै होउन, गल्ती गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन् ।’ बाँस्कोटा प्रकरणमा पनि सत्य, तथ्य छानबिन हुनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने,‘हामी प्रणालीलाई बढावा दिउँ । विधिको शासन बसाल्ने कुरा गरौं ।’